"Nefa tsy ho an'ireto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino Ahy koa noho ny teniny; mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka Anao Ray ato amiko, ary Izaho koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy; mba hinoan'izao tontolo izao fa Hianao no naniraka Ahy" - Jao. 17:20,21.
Ny firindrana sy ny firaisana eo amin'ny samy olona avy amin'ny sehatra samy hafa no vavolombelona mahery manaporofo fa naniraka ny Zananilahy hamonjy ny mpanota etk amin' izao tontolo izao Andriamanitra. Tombontsoa ho antsika ny mijoro ho vavolombelona ny amin' izany. Tsy maintsy mametraka ny tenantsika ho eo ambany fifehezan'i Kristy anefa isika ho fanatanterahana izany. Tokony hovolavolaina hifanaraka amin'ny toetrany ny toetrantsika, tokony hampileferina eo ambanin'ny sitrapony ny sitrapontsika. Rehefa izany dia tsy hisy fifandirana ao anatin'ny fiaraha-miasantsika.
Hitarika ho amin'ny fihetsika izay manimba ny fiarahan'ny Kristianina ny fahasamihafana kely izay fikirina ao anaty. Koa aoka tsy havelantsika handresy antsika ny fahavalo. Aoka isika hanatona an'Andriamanitra sy ny hafa akaiky kokoa hatrany. Rehefa izany dia ho tahaka ny hazon'ny fahamarinana izay nambolen'ny Tompo isika, ary tondrahan'ny loharanon'aina. Hamokatra be tokoa isika! Moa va i Kristy tsy efa nilaza hoe: "Izany no ankalazana ny Raiko, mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro hianareo" - Jao. 15:8?
Ny fon'ny Mpamonjy dia mitoetra eo amin'ireo mpanara-dia Azy izay manatanteraka ny drafitr'Andriamanitra amin'ny antsakany sy andavany. Tokony ho iray ao Aminy izy ireo, na dia miely manerana izao tontolo izao aza. Tsy afaka mampiray azy ireo ao amin'i Kristy anefa Andriamanitra raha tsy vonona ny hahafoy ny làlany izy ireo ka hanaraka ny làlan'Andriamanitra.
Rehefa inoana amin'ny fahafenoany ny vavaka nataon'i Kristy, rehefa entin'ny vahoakan'Andriatnanitra eo amin'ny fiainany andavanandro ny toromarika avy Aminy, dia hiseho eo amin'ny laharana misy antsika ny firaisan-kina. Hifamatotra ny samy mpirahalahy, amin'ny fatorana volamenan'ny fitiavan'i Kristy. Ny Fanahin'Andriamanitra irery ihany no afaka mitondra izany firaisana izany. Ilay nanamasina ny Tenany ihany no afaka manamasina ny mpianany. Rehefa mitambatra Aminy izy ireo dia hitambatra amin'ny hafa amin'ny alalan'ny finoana masina indrindra ihany koa. Ho tonga amintsika izany firaisana izany rehefa miezaka fatratra mitady izany araka izay anirian'Andriamanitra azy isika. — TFC 8:242,243.